MADAX-CADDE!!! (Sheeko gaaban) – War La Helaa Talo La Helaa
MADAX-CADDE!!! (Sheeko gaaban)
By Ner Ner	 Last updated Dec 23, 2017
Lo’ caawa iga mir-kacday intii aan Haasaawe ku maqnaa, ayaan is iri ‘ ka dabatag si aysan Beeraha Dadoow u daaqin oo aan qaan laguu qabsan.
Waraarka, halka reerku yaallo ka hooseeya ayaan ku maleynayaa inaysan ka fogeyn, mase joogto markii aan tagay. Tooshkii aan watay ayaan ku ifinayaa Raadkeedi, waana gartay jihada ay qabatay.
Waxoogaa markii aan Saanteedii daba socday ayey ila gashay Dhul Cawsku aad ugu badanyahay, markaasaan yara dhibsaday oon is iri ‘ Dhabbe waxoogaa ii jira ku dhacoo halkaa ka qooratee.
Dhabbihii aniga oo Lugta Midig saaray tan bidixna wali ku dhex jirto Caws aad u badan ayaan dareemay inay wax isku keey duubeen, la bood markaan is iri ayaa Suulka Lugteyda wax dhag siiyeen.
Tooshkii ayaan deg deg ugu ifiyey mise waa Mas madoow oo dhalada Madaxiisuna caddahay. Ushii aan sitay ayaan laba jeer oo midi madaxa ka heshay ku dhinfay, markaasuu is duuduubay. Intaan Ushii kusoo jiiday ayaan Dhabbaha bartamihiisa soo dhigay oo aan ged geddiyey.
Suulkeygi oo dhiigaya ayaan arkaa. Xanuun yarna waan dareemayaa. Khatarta Bahalku leeyahay aniga oo Cilmi dhagood ku qaba, maankana ku haya in waxa ugu xun ee Deegaankan la isku habaaro tahay ‘ Madax-cadde ku qaniin ‘ayaan Go’aygii Darafta ka jeexay oo aan si xooggan ugu dhuujiyey halka Suulka ugu dambeysa, si aaney Waabaayadiisu iigu fidin oo aysan ii saaqin.
Xilligu qiyaastii waa 4:00 habeennimo, waa goor ay Salaadda subax soo dhowdahay. Aniga oo Suulkii la xarbinaya, salkuna dhulka ii yaal, ayaan meel horteyda ah oo aan ii muuqan waxaan ka maqlayaa Kaba-dhawga qof socota ah. Muuqaal Nimeed ayaa ii muuqda, siduu usoo dhowaanayey ayaa Nin dheeri soo istaagay meel tallaabo u jirta Maskii Madax-caddaha ahaa oo dabada nuux nuuxinaya.
Nafta ayaa inta dambe wali uga jirta. Intuu Karbuuno uu sidatay Maskii ku ifiyey ayuu i xaal wareystay “War bal warran…bahalku miyuu ku qaniinay?”. Si deg deg ah oo welwel badan ka muuqdo ayaan ugu sheegay inuu Suulka iga qaniinay.
Caag biyeysan iyo Ul garabka u surneyd intuu soo wareejiyey oo dhulka dhigay ayuu isoo ag kadaloobsaday. Suulkeygi oo Mirraaq ku dhuuqsanyahay intuu rog rogay ayuu Ableey u xirnayd gasha kasoo dhiftay. Farta iyo Suulka gacantiisa bidix ayuu inta si xooggan ugu qabtay,Toorreydii laba meelood sag iyo sag kaga siiyey suulkii awalba dhiigayey, si adag ayuu Suulkii uga lisay Dhiig iyo Carun nooc kale ah.
Go’aygii ayuu haddana mirraaq ka jeexay oo si adag ugu dhuujiyey Qoobka korkiisa.
Aniga markan xanuun ayaa igu sii kodhaya, dhafoorka intuu gacanta iga saaray ayuu i weydiiyey ” Maskaxda kuleyl ma ka dareemeysaa”?. “Maya” ayaan ugu warceliyey.
Karbuunada ayuu Wajigeyga ku ifiyey markaasuu igu yiri “Ilaahey idankii waad ka kaceysa”.
Ninku waa nin Deegaanka ah oo Safar ka yimid, waa Beeraleey lagu magacaabo Axmed, kuse magac dheer ‘Axmed dheere’. Intuu gacanta i qabtay ayuu igu yiri ” na kici aan gurigii ku geeyee, waxaa dhici kara in xanuunku kugu siii bato oo aan markaas u baahdo dad ila kaa qaada ee inta aad roontay aan kusii luudiyee”. Isaga oo garabka i haya ayaan xaggiii guriga usii hadaafay, ciribta ayaan ku socdaa oo cagta dhulka ma saari karo.
Wuxuu isii hadaafiyaba, aqalkeennii ayaan gaarnay. Xerada Ariga horteeda Walaalkey iga yar oo jiifa intuu hurdada ka toosiyey ayuu ku yiri ” Orodoo hooyo soo kici, Ninkan Mas baa qaniinaye”. Kii ila dhashay oo argagaxsan ayaa orod is taabtay oo Aqalkii ugu galay Hooyo oo Ilmo yar la jiifta. “Hooyo….hoooyo..ka kac” intuu yiri ayuu deg deg noogu soo laabtay isaga oo aan waxba u sheegin.
Hooyadey oo malaha is tiri ‘ Tolow ma aragii baa bahal u dhacay’ ayaa aqalkii deg deg uga soo baxday oo Xeradii Ariga soo abbaartay. Waxay aragtaa Toosh ifaya iyo Rag ku foorara Qof dhulka yaalla, inteey horteenna soo joogsatay bay na weydiisay waxa jira?. Intiise aan loo jawaabin ayey garatay Qofka dhulka yaallaa inuu Wiilkeedi yahay..Kii Reerkaba xoogga u ahaa. “bismillaahiye….maxaa ku dhacay Igaar ka” markii ay ku celisay ayaa Axmed Dheere yiri ” Madax-cadde ayaa qaniinay”.
“Madax-cadde!!!……Alla ba’ay” inteey tiri ayey madaxa qabsatay oo sidii in Dhulku la wareegay wiririf iska daba tiri. Way barooratay oo qalbigaa bel belay…meel laga jiro iyada oo aan garaneyn ayey igu soo dul dhacday oo intey isku key duubtay Daanka Daanka ii saartay..Ilmada kulul ee Dhabankeeda ku hoobaneysa ayaa keyga ku dis gobo’ leh…way kulushay waxayse aniga ii tahay Raxmad qaboojineysa kuleyka iyo Xanuunka daran i haya.
Axmed dheere ayaa intuu Qori kasoo jabsaday Oodda Xerada, fagid ku billaabay Dab caawa fiidkii la ammaagay ase hoosta ka nool. Qorigii yaraa ayuu dabka galiyey oo markii uu dhilay saddex meelood kaga qabtay Suulkii bahalku dhaawacay. Farta iyo Suulka gacantiisa midig ayuu Lugteydi ku tuutuujiyey, ” Lugta barar baa kusii socda” intuu yiri ayuu isaga oo Hooyadey la hadlaya weydiiyey haddii ‘ Wan rooni Xerada ku jiro.?
Hooyadey, iyada oo aan hadalna dhihin ayey fadhigii ka boodday oo iyada oo Saanta dhulka la gafeysa Xeradi gashay. Wan cayillan ayey qoorta kusoo dhegtay oo ma ay jiidine kor u hinjisay si ay u xambaarto, way qaadi kari wayday markaasey midkii iga yaraa u qeylisay, intuu dug yiri ayuu soo xambaaray Wan Deyrtii hore Naaska hooyadii uu ka guray
Axmed Dheere intuu Wankii dibriyey ayuu Wiilkii ku yiri “ii caali wanka”, dabadeedna gawrac ayuu ku jiiday. Lugteydii bararnayd ayuu Dhiiggii ku waraabshay oo gacantana la mariyey.
Markii Wanku rafashadii daayey ayuu isaga oo aan Harag-siibin Wankii uur-dooxay, Calooshii ayuu bannaanka keenay oo si gaar ah Bu’dii u dilaacshay, Uus kulul ayuu labada sacab kusoo qaaday kuna maluuqay Lugteyda wixi jilibka ka hooseeya, si uu u toobo Bararka lugta saaran.
Dhiiggii iyo Uuski oo lugta ku engagey ayaan Hurdo iyo Calwasaad wada socda la dhacay. Xasuusta Maskaxdeydu ma wada kaydin wixii caawa dhacay, waxayse meel gooni ah ku dhigtay Baroortii Hooyadeey, ba’ayeysigeedii iyo Ilmadii kululayd ee dhabankeyga midig qoysay.
Waxay ila tahay inaan dhageysanayo Raadiye aan Reerkaba u oollin, waxaan si fasiix ah u maqlayaa Codka Rabbi ha u naxariistee Careys Ciise Kaarshe oo ku luuqeynaya Saarkii ‘Hooyo’ ee ay meerisyadani ku jireen:
Hilowlaha ay dhashaa
Haddii meel laga hayaa
Asuu haaraa habeen
Waa tii hoogeysatoo
Ilmadu ay hibitiqdee
Hooyadu waa lama huraan.
Waxaan qarow iyo Qeylo ku jiro maalintii oo dhan, ayaan mar qura indhaha kala qaaday habeenkii dambe xilli dadku hurdo. Dhuxul Dab ah oo ka hartay Dhammal/ Dagab caawa fiidkii la shiday ayey Lugteydu ag taallaa, Hooyadey oo dabka iga ilaalineysa, si aanan ugu rafan, mooyee Cid kale ilama joogto.
Aragga Indhaheyga iyo Fahamka Maskaxdeydu intuba waa ay joogaan, Carrabka ayaase i weyn oo hadalku iima saxna, Jirka oo dhanna Xanan ayaa iiga jajaban.
Inta ay si taxaddar leh iisoo fariisiday oo Wajiga gacanta iiga salaaxday, Qoortana ii riixday ayey i kalgaceyl-dhunkatay oo Caano ay caawa dhan layrineysay igu qabatay, si la mid ah maalintii ay i anqarisaye aan Uurkeeda kasoo baxay.
FIIRO GAAR AH: Sheekadani Run maaha, waa mid curis ah.Qof ay ku dhacday ma arag, mana maqal.aqoon uma lihi xanuunka ka dhasha qaniinyada Madax-caddaha.
Qore: Qaasim Abdulle Nero.
SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn
Dadka amniga siyaasadeynaya caruurtoodii aaway ? ( Faallo Qiirro Badan)